Dhangii lakkoofsa fi sadarkaa, lakkaawwii boqannaaf galmee ammaa keessatti ifteessa.
Sadarkaa toorii filatameef, dhangeessuu ifteessi.
Akkaataa lakkaawwii isa sadarkaa toorii filatametti fayyadamuudhaaf barbaaddu fili.
Lakkoofsawwan Roomaa (guguuddaa)
Lakkoofsawwan Roomaa (xixiqqaa)
Lakkaawwii abaacaa qubee gurguddaaa walfakataa wajjin,Essaa lakkoofsii qubee sadarkaa boqonaa agarsissuu.fakkeenyaaf, lakkoofsi lamafaa sadarka sadafaa irraa jirru"BBB".
Lakkaawwii abaacaa qubee xixiqqaa walfakataa wajjin,Essaa lakkoofsii qubee sadarkaa boqonaa agarsissuu.fakkeenyaaf, lakkoofsi sadafaa sadarka lamaffaraa irraa jirru"cc".
Mallattoon lakkaawwii hinjiru. Arfii yk mallattoo dirreewwan Foo'aa keessaa, jalqaba sarara lakkoofsifame irratti mul'ata.
Dhangii arfii lakkaawwii fili.
Sadarkaalee xixiqqoo agarsiisi
Lakkoofsa sadarkaawwan toorii isa lakkaawwii boqonnaa keessatti dabaltu fili. Fakkeenyaaf, sadarkaawwan sadii kan lakkaawwii boqonnaa agarsiissuudhaaf, "3" fili: 1.1.1
Barruu isa, lakkoofsa boqonnaa fulduratti mul'isuu barbaaddu, barruu yaadannoo keessatti galchi. Fakkeenyaaf, "Boqonnaa: 1" mul'isuuf, "Boqonnaa: " barreessi.
Barruu isa booda lakkofsa boqonnaa galchi. Fakkeenyaaf, "1." mul'isuuf, (.) barreessi.
Lakkoofsa isa akka lakkaawwii boqonnaatti lamkaasuu barbaaddu galchi.
Title is: Lakkaawwii